Inona no andro be tantaram-pitiavana indrindra (mifototra amin'ny zava-mahadomelina tsy fananganana erectile)? - Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana | Desambra 2021
Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fahasalamana Community, Company Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Pets Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Ny Fizahana Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fiaraha-Monina Fanatanjahan-Tena Mavesatra Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Mpanao Gazety News Wellness
Tena >> Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana >> Ity ny fotoana tantaram-pitiavana indrindra amin'ny herinandro
Ity ny fotoana tantaram-pitiavana indrindra amin'ny herinandro
Mety ny andro zoma ve no tantaram-pitiavana indrindra amin'ny herinandro? Ny ankamaroan'ny olona dia mandray ny fanafody any amin'ny farmasia amin'ny alatsinainy. Saingy, ny fametavetana dia mameno zava-mahadomelina erectile malaza-indrindra vardenafil , aka levitra —Tsoa amin'ny zoma, araka ny angon-drakitra SingleCare.
Ny fanafody tsy fetezana erectile izay voalaza matetika dia misy:
levitra , Adcirca ( levitra )
Levitra , Staxyn ( levitra )
Inona no ao ambadik'ity fironana ity? Ny mpitsabo dia manazava ireo lazan'ny zava-mahadomelina ireo amin'ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra am-pitiavana.
ED dia ahiahy mandritra ny taona
Angamba tsy mahagaga raha mahazo dokotera nofenoina med ho an'ny med ny lehilahy amin'ny fiandrasana ny faran'ny herinandro na hetsika manokana hafa miandry.
Douglas Jeffrey, MD, manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana ao amin'ny fianakaviana ao Eugene, Oregon, ary mpandray anjara amin'ny eMediHealth, dia nanamarika fa ny fikarohana sasany dia nahitana fiakaran'ny fanafody amin'ny pilina ED amin'ny fotoana sasany amin'ny taona, matetika amin'ny andro fankalazana toy ny Taombaovao, ny fahefatra Jolay, ary eny, ilay antsoina hoe fialantsasatra am-pitiavana indrindra, Andron'ny mpifankatia.
Ny herinandro alohan'ny andron'ny mpifankatia dia fotoana be mandavan-taona ho an'i Paul Gittens, MD, urology ary mpanorina ny Ivotoerana fitsaboana ara-nofo any Philadelphia sy New York. Vinavinainy fa ny sasany amin'ireo fiakaretsaka amin'ny hetsika dia mety ho vokatry ny fanapahan-kevitry ny Taom-baovao, miaraka amin'ireo olona izay nivoady fa hahita olana sasany horesahina amin'ny taona vaovao.
Saingy nilaza i Lawrence Jenkins, MD, urology izay manampahaizana manokana amin'ny fahasalaman'ny lehilahy sy ny fahavokarana ao amin'ny The Ohio State University Wexner Medical Center, fa ny Andron'ny mpifankatia dia matetika tsy miteraka fangatahana fangatahana fanafody ED. Tsy mbola nahatsikaritra fahasamihafana mihitsy aho, indrindra satria ny ankamaroan'ny olona dia tonga mijery ahy ho an'i ED ho olana iray mandavantaona, hoy izy.
Manaiky i Dr. Gittens fa olana mandritra ny herintaona ho an'ny lehilahy izany-ary tsy ny fahazoana dokotera fotsiny mba hanatsarana na hahafahan'izy ireo manao firaisana ara-nofo. Maro amin'ireo lehilahy izay mitady ny fikarakarany no miahiahy momba ny fahasalaman'izy ireo sy ny mety ho antony mahatonga ny tsy fiasan'ny erectile .
Tsy dokotera fotsiny no tadiavin'izy ireo, hoy ny Dr. Gittens. Tian'izy ireo ho fantatra ny zava-mitranga ary ny antony mety ilàn'izy ireo maka fanafody.
Alohan'ny hangatahanao fanafody tsy fetezan'ny erectile…
Nahita ny dokam-barotra momba ny fanafody ED ianao. Noho izany, mety efa henonao ny fampitandremana hanamarina amin'ny mpitsabo anao raha mandray nitrates ianao, manana olana amin'ny tosidra, na aretim-po.
Misy antony misy ireo fampitandremana ireo. Nilaza ny manam-pahaizana fa zava-dehibe ho anao ny manao fanadinana feno, ao anatin'izany ny fanadinana ara-batana sy ny famerenana ny tantaram-paharetanao alohan'ny hamaritana anao sy hitondranao fitsaboana. Ny fanadinana tanteraka dia hahafahan'ny dokotera mitady famantarana ny toe-pahasalamana mety hiteraka tsy fahatomombanan'ny erectile fa mety ho olana samirery.
Ny ED dia mety ho marika fampitandremana mialoha ho an'ny aretim-po, toy ny aretim-po na tapaka lalan-dra, hoy ny Dr. Jenkins. Ny tsara indrindra dia ny fanombanana olona iray manana trangan-javatra mety hamaritana ny loza mety hitranga amin'ny CV. Mety haseho fitsapana adin-tsaina.
Antony hafa izay afaka mandray anjara amin'ny ED dia ny diabeta, ny fifandraisana amin'ny fanafody preskripsi hafa, fampiasana alikaola, ary karazana fampiasana zava-mahadomelina hafa. Fanampin'izay, mety misy antony ara-psikolojika miasa. Ankoatr'izay, ny haavon'ny testosterone ambany dia manampy amin'ny libido ambany sy ED, izay mila fanombanana bebe kokoa sy fitsaboana raha ilaina. Te ho afaka hamaha ny antony fototra ianao mba hahafahanao manomboka ny fitsaboana sahaza .
Fanampin'izany, samy hafa ny olona tsirairay, ary ny fomba fiainanao sy ny zavatra ilainao dia mety hanome fanafody ED hafa noho ilay bandy mipetraka eo akaikinao ao amin'ny efitrano fiandrasana. Zava-mahadomelina samihafa araraoty ao anatin'ny vatanao amin'ny taha hafa , ary ny vokany dia mety haharitra mandritra ny fotoana samihafa. Ohatra, ny fanafody toy ny Cialis dia mety maharitra 24 ka hatramin'ny 36 ora, fa Levitra mety haharitra efatra ka hatramin'ny dimy ora ary Stendra enina ka hatramin'ny 12 ora.
Ny voka-dratsin'ny tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tsy tantaram-pitiavana
Ny fanafody toy ny Viagra sy Cialis dia miasa tsara ho an'ny ankamaroan'ny lehilahy ary zaka tsara, hoy ny Dr. Gittens. Fa afaka manana izy ireo voka-dratsy . Noho izany, vantany vao mameno ny dokotera amin'ny Viagra na fanafody ED hafa ianao, dia aza hadino ny mijery zavatra tsy mahazatra.
Misy ny voka-dratsy mifandraika amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana rehetra ho an'ny ED, hoy ny Dr. Jeffrey. Ny sasany amin'ireo voka-dratsy ateraky ny… fanafody dia misy aretin'andoha, fikosehana ny tarehy sy ireo faritra hafa amin'ny vatana, mangidihidy ary mankarary vavony.
Fanampin'izay, mety hiteraka fihenan'ny tosidranao izany raha toa ianao ka mandray ny iray amin'ireo nitrate na nitroglycerine voalaza etsy ambony ireo. Izany no antony, raha manombatombana anao amin'ny fanaintainan'ny tratra na aretim-po ianao dia ampahafantaro hatrany amin'ny dokoteranao momba ny fampiasana medikaly ED izay azonao tamin'ny vao haingana. Mety ho tratran'ny zava-mahadomelina koa ianao amin'ny zava-mahadomelina iray, fa tsy avy amin'ny iray hafa, ka mety te hiala ianao. Ny dokoteranao dia afaka manampy anao amin'izany fanapahan-kevitra izany.
Zoma na tsia, aza miandry raha manana ahiahy momba ny ED ianao, anisan'izany ny antony mety hitranga, ny voka-dratsin'ny fanafody na olana hafa. Aleo mahazo fanampiana aloha, hoy ny toro-hevitra avy amin'ny Dr. Gitten.
Britney Spears TikTok Video dia miteraka ahiahy ho an'ny sasany
hazo dite no mitsabo masirasira menaka aretina
azonao atao ve ny mamoaka fanafody amin'ny trano fidiovana?
inona no azoko ampiasaina ao an-trano raha misy aretina masirasira
misy generic ho an'ny cialis na viagra
firy ny advil azoko raisina ao anatin'ny 24 ora